IMDB: 6.9/10 1,396 votes
[18+] My Phone Sex Partner (2012) Whatcha Wearin’?
26 Years 26 Years (2012)တစ်ခါတုန်းက အပြစ်မဲ့ပြည်သူပေါင်းများစွာကို အစုပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ပြီး နိုင်ငံရဲ့သမ္မတရာထူးကို ရယူခဲ့တဲ့ ရာထူးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်- သမီးလေးအတွက် နာမည်ရွေးနေတုန်း Head shot နဲ့ သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ မိခင် - ဆန္ဒပြရင်း ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်လို့ မောင်လေးကို ဘေးကင်းရာပို့ဖို့ပြေးရင်းနဲ့ ဗိုက်ပွင်သွားခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသူလေး - စစ်သားအရာရှိတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီး လူတွေကိုသတ်ရတာ မရှက်ဖူးလားလို့မေးရင်း ပစ်သတ်ခံထိသွားတဲ့ ၈ နှစ်အရွယ်ကလေးရဲ့ဖခင်ဒီလိုအပြစ်မဲ့ပြည်သူပေါင်းများရဲ့ အသက်တွေကိုချနင်းပြီး မတရားအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်....ဒီဖြစ်ရပ်တွေဟာ ၁၉၈၀ ခုနှစ်တုန်းက ​ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေပါGwangju Uprising မှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ ဒီကိစ္စတွေဟာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာတဲ့အခါမှာတော့ အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့သူကလည်း ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဘဝမှာ ပြည့်စုံစွာနေနေပြီး ​ လူတွေလည်း မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်သွားကြပြီဗျဒါပေမယ့် ...."Axe forgets but the tree remembers" ဆိုတဲ့စကားလိုပေါ့အချိန်​တွေ ဘယ်လောက်ကြာကြာ ဒီဖြစ်ရပ်ကို ဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်တဲ့သူတွေကတော့ တစ်နေရာစီမှာ ဘဝတစ်ခုစီနဲ့ရှိနေခဲ့ကြတယ်။အားလုံးမှာ ဒဏ်ရာတွေကိုယ်စီရှိနေခဲ့ကြတော့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အကူအညီနဲ့ ဒီဒဏ်ရာတွေကိုချွေးသိပ်ဖို့အတွက် တူညီတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီး အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ဘုံရန်သူကို ချေမှုန်းဖို့ မစ်ရှင်ပေါ့ဗျာ။ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ဒီကားကိုကြည့်သင့်လားမကြည့်သင့်လား ခင်ဗျားတို့ဆုံးဖြတ်လို့ရနေပါပြီကိုရီးယားအက်ရှင်ကားဆိုတဲ့အတိုင်း ကြည့်ကောင်းမကောင်းကတော့ ညွှန်းစရာကိုမလိုပါဘူးကြမ်းပေ့ရမ်းပေ့ဆိုတဲ့ ဂိုဏ်းကလူမိုက်တွေနဲ့ ရှယ်ကိုချကြမှာနိုင်ငံရေးဖြစ်ရပ်ကို အခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ကားဖြစ်တဲ့အပြင် လူတွေကို ...
Project X (2012) ဒီတစ်ခါ CM ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ကြည့်ရမဲ့ ကားကောင်းလေးတစ်ကားကို ပြန်လည်တင်ဆက် ပေးလိုက်ရပါတယ်။ အပျော်တွေကူးစက်လာမယ့် ဇာတ်ကားဖြစ်သလို…အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှု ..ခံယူချက်နဲ့ လွတ်လပ်မှုတွေကို တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ခံစားရမှာပါ။ဇာတ်လမ်းကို အနည်းအကျဉ်းပြောရရင်အသက် ၁၇ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှာ သောမတ်စ် တစ်ယောက် မိဘတွေကလည်း ခရီးသွားနေတုန်း သူ့သူငယ်ချင်း အနည်းငယ်နဲ့ မွေးနေ့ပါတီလေးတစ်ခု ကျင်းပဖို့ စီစဉ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျန်တဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်က လက်မခံပဲ ဒီလို ပါတီဆိုတာ လူများရင်ကောင်းတဲ့ အကြောင်း ဖျောင်းဖျပြီး တစ်ခြားလူတွေကို ထပ်မံဖိတ်ခေါ်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီမှာပဲ ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့ လူအုပ်ကြီးရောက်လာပြီး ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရတွေ ဖြစ်ကုန်တော့ပါတယ်။ သောမတ်စ် ရဲ့ အိမ်လည်း ရစရာမရှိအောင်ပျက်စီးသွား ပါတော့တယ်။ သူ့မိဘတွေ ပြန်ရောက်လာတဲ့ အချိန်မှာတော့ သောမတ်စ် တစ်ယောက် ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲ ဘယ်လိုတွေ သောင်းကျန်းကြမလဲဆိုတာကို ရယ်ရယ်မောမော ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုနဲ့ကြည့်ရင်တော့ ခေါင်းခေါက်ခံရမယ့်ဇာတ်ကားပါ။ File size…(1.7 GB) and (1 GB) Quality….Extended BluRay 1080p and 720p 5.1CH Format…mp4 Duration….01:30:00 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Nyeinsaeya Aung
Rise of the Guardians (2012) Director: Peter Ramsey ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပြီးNovember 21, 2012 (USA) မှာ ရုံတင်ခဲ့တဲ့ လူကြီးရော ကလေးပါ ကြည့်သင့်တဲ့ယုံကြည်မှု စိတ်ဓါတ်ရေးရာ မြင့်တင်ပေးပြီး စိတ်ဓါတ်ခွန်အား ရရှိစေမယ့် နတ်သမီး ပုံပြင်အခြေခံကာတွန်းဇတ်လမ်းလေး ဖြစ်ပါတယ်....==================================ဇတ်လမ်းပုံစံကတော့ ကြင်နာတက်တဲ့ စိတ်ထားရှိတဲ့ ဂျက်ဖရော့ဒ်ဟာ လူသား ဘ၀ မှာ သူရဲ့ ညီမလေးကို ကယ်ဆယ်ဖို့ သူ့အသက်ကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့ပြီး ရေခဲပြင်ထဲမှာ သေဆုံးသွားပါတယ်...တစ်ရက်သော လပြည့်ညမှာတော့ လနတ်သား ဟာ ဂျက်ဖရော့ဒ် ကိုသေရွာကနေ နှိုးယူပြီး လူသားကလေးတွေ ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို ဆောင်ကျဉ်းပေးမယ့်နှင်းလူသား အဖြစ် ဖန်တီး ပေးလိုက်ပါတယ်....ဂျက်ဖရော့ဒ် ရဲ့ အတိတ်ဘ၀ မှတ်ဉာဏ်ကို ဖျောက်ထားခဲ့တဲ့အတွက်၎င်း ကိုယ်တိုင် စိတ်ထားကောင်းမွန်တဲ့ ကောင်လေး တစ်ယောက်ဆိုတာ မသိခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့် သူ့ကိုသူ နတ်ဆိုး တစ်ယောက်လို့ မှတ်ယူပြီး လေလွင့်နေတုန်းဆန်တာကလော့ တို့ အက်စတာဘန်နီ ...
Jab Tak Hai Jaan (2012) Samar မျက်နှာ စူပုတ်ပုတ်နဲ့ ရဲ့ရင်တဲ့ ဗုံးရှင်းသမား၊ ဗုံးတစ်လုံး ဖြုတ်ပြီးတိုင်း အေးဆေးတဲ့ နေရာမှာ တစ်ယောက်ထဲ အနားယူ တတ်တယ်။ သူ့ဘဝရဲ့ ၉၈ လုံးမြောက် ဗုံးကို ဖြုတ်ပြီး ကမ်းခြေဘက်မှာ တစ်ယောက်ထဲ အနားယူနေတဲ့ အချိန် Akira ဆိုတဲ့ မိန်းမလှလေး ရေနစ်လို့ ဆင်းကယ်ပြီး အနွေး ဓါတ်ရဖို့ Samar ရဲ့ အပေါ် အနွေးထည်ကို ပေးလိုက် မိရာမှာ မထင်မှတ်ပဲ Samar ရဲ့ Diary ကို Akira ရသွားပြီး Samar ရဲ့ လွမ်းစရာ ကောင်းတဲ့ London က အချစ် ဇာတ်လမ်းကို သိခဲ့ရပြီး Samar ကို Akira တစ်ယောက် စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်။ Akira ဆိုတာ Discovery Channel မှာ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ...
IMDB: 6.8/10 48,228 votes
The Dark Knight Rises (2012) The Dark Knight Rises (2012)=======================Following the death of District Attorney Harvey Dent, Batman assumes responsibility for Dent's crimes to protect the lateattorney's reputation and is subsequently hunted by the Gotham City Police Department. Eight years later, Batman encountersthe mysterious Selina Kyle and the villainous Bane,anew terrorist leader who overwhelms Gotham's finest. The Dark Knightresurfaces to protectacity ...
IMDB: 8.4/10 1,458,811 votes
Jan Dara IMDb Rating 5.8/10 Jan Dara အျဖစ္ Pee Mark ၇ဲ႕ နာမည္ေက်ာ္မင္းသား Mario Maurer ကပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ထားတာပါ Jandra = အမိႈက္ေကာင္ေလး သင္ ဒီကားကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဖခင္ေမတၱာဟာ ဘာလဲဆိုတာကို အရင္ဆံုး နားလည္ေအာင္ သိထားသင့္တယ္လို႕ထင္ပါတယ္။ ေမြးကတည္းက မိခင္ဆံုးပါးသြားျပီး ဖခင္ျဖစ္သူရဲ႕ မုန္းတီးျခင္းကိုခံ ခဲ့ရတဲ့ ဂ်န္ အဘြားျဖစ္သူရဲဲ႕ ကယ္တင္မႈေၾကာင့္ ေမြးေမြးျပီးျခင္း အသက္ေဘးကလြတ္ခဲ့ရတဲ႕ဂ်န္ မိခင္ျဖစ္သူရဲ႕ ညီမ၀မ္းကြဲ အေဒၚျဖစ္သူရဲ႕ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေၾကာင့္ လူလားေျမာက္ခဲ့ရတဲ့ ဂ်န္ ဆိုတဲ့ေကာင္ေလး ၁၉၁၅ ခုႏွစ္ မုန္တို္င္းထန္တဲ့ ညတစ္ည ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ ဗလန္ပူးအိမ္ေတာ္ၾကီး မွာ ပ်ားပန္းေခတ္မွ်အလုပ္ရွုပ္ေနၾကတဲ့ အလုပ္သမားမ်ားနဲ႕ မခံမရပ္ႏိုင္နာက်င္မႈကို အံတုျပီး မိမိ၏ ရင္ေသြးကို ေမြးဖို႕ ၾကိဳးစားေနတဲ့ အိမ္ေတာ္ရဲ႕ သခင္မ ဒါရာ ဟာ သူ၏ သားေလး ဂ်န္ ကို ေမြးေမြးျပီးျခင္း ေလာကၾကီးကို ေက်ာခ်ုင္းစြန္႕ခြာသြားခဲ့ပါတယ္။ မိန္းမျဖစ္သူကို ဆံုးရွုံလိုက္ရတဲ့ ဖခင္ျဖစ္သူ ၀စ္စနန္ဒီခ်ာ က ဂ်န္ အား သတ္ျပစ္ရန္္ၾကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ဘြားေအျဖစ္သူ၏ကယ္တင္မႈေၾကာင့္ ...
[18+] Due West: Our Sex Journey (2012) Dark Side Production မှ ပြန်လည်မွမ်းမံတင်ဆက်သည်..အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရေပန်းစားခဲ့တဲ့ဝတ္ထုတစ်ခုကို အခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ ဟောင်ကောင် 18+ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။Comedy, Drama, Romance ဖြစ်ပြီး IMDb (5.4/10) ပါ။အဖော်အချွတ်တချို့နဲ့ အပြောအဆိုတချို့က ဘွင်းဘွင်းကြီးတွေမို့ ကလေးလူငယ်တွေ မကြည့်သင့်ပါ။Lan Kwai Fong ဇာတ်ကားကဲ့သို့ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်ကောင်းကောင်းနဲ့ Erotic ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ File size…1.3GB Quality…Blu-Ray Rip 720p Format…mp4 Duration….01:59:00 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….RGB Translated by HTS
[18+] Due West: Our Sex Journey (2012)
Argo (2012) ARGO ==== ARGO ရုပ်ရှင်ဟာ ၁၉၇၉-၈၀ မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ အီရန်တော်လှန်ရေးအတွင်း သံရုံးက လွတ်မြောက်အမေရိကန်သံရုံးဝန်ထမ်း ၆ ယောက်ကို ကယ်ထုတ်တဲ့အကြောင်းကိုရိုက်ပြထားတဲ့ဇတ်ကားပါ။၁၉၇၉ မှာ အီရန်နိုင်ငံတွင်းတော်လှန်ရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် တော်လှန်ရေးအတွင်းမှာ အမေရိကန်သံရုံးကိုသိမ်းပြီး အီရန်ဘုရင်ဟောင်း ရှားကိုနိုင်ငံခိုလှုံခွင့်ပေးထားရာကနေပြန်လွဲပေးဖို့ တောင်းဆိုလာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီသံရုံးအသိမ်းခံရချိန်မှာ လွတ်သွားတဲ့ သံရုံးဝန်ထမ်း ၆ ယောက်ကိုကယ်ဖို့ စီအိုင်အေကလူတွေ ကြိုးစားကြပုံကိုရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ARGO ကို အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာထွက်ခဲ့ပြီးတော့ ဇတ်လိုက်မင်းသား Ben Affleck ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားပြီး ထုတ်လုပ်သူကလဲ Ben Affleck နဲ့ George Clooney ကြီးတို့ပါပဲ။ ဒီဇတ်ကားဟာ ၈၅ ကြိမ်မြောက်အကယ်ဒမီမှာ nominations ၇ ခုဝင်ပြီး ဆု သုံးခုရခဲ့ပါတယ် (Best Picture, Best Adapted Screenplay, and Best Film Editing) အဲ့နောက် Golden Globe Award မှာလဲ Best Motion Picture – Drama ...
IMDB: 7.7/10 559,997 votes
Battleship (2012) နာမည်ကျော် အဆိုတော် Rihanna ပါဝင်ထားပြီး John Carter ကားနဲ့ မြန်မာ ပရိတ်သတ် တွေ အသိများ ခဲ့တဲ့ မင်းသား Taylor Kitsch က ဗိုလ်လေး အဲလက်စ် ဟော်ပါ အဖြစ် ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဟော်ပါ ကတော့ တကယ်တော့ ပေါက်ကရ နေထိုင် တက်တဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ ...တစ်နေ့တော့ သူလည်း ရေတပ်ဗိုလ် ရဲ့ သမီးကို ကြိုက် မိရာကနေ သူ့အစ်ကို ဖြစ်သူရဲ့ ဆွဲဆောင် မှု့ကြောင့် ရေတပ်ထဲ ဝင်ခဲ့ပြီး ဗိုလ်လေး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲ သူလည်း နှစ်စဉ် ကျင်းပနေကျ နိုင်ငံ ပေါင်းစုံ ရေတပ် လေ့ကျင့်ရေးမှာ ပါဝင်ခဲ့ရပါတယ်။ လေ့ကျင့်နေရင်းကနေ မမျှော်လင့်တဲ့ ယာဉ်ပျံကြီးတွေရောက်လာ ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ယာဉ်ပျံတွေဟာ လေ့ကျင့်ရေးရဲ့ အစိတ် အပိုင်းတစ်ခု မဟုတ်သလို သူတို့ထင်နေသလို မြောက်ကိုးရီးယားဘက်က မဟုတ်ပါဘူး ထူးဆန်းတာက သူတို့ ယာဉ်တွေ နားမှာ ရေဒါတွေ အလုပ် ...
IMDB: 5.8/10 212,170 votes
The Avengers (2012) MCU When an unexpected enemy emerges and threatens global safety and security, Nick Fury, director of the international peacekeeping agency known as S.H.I.E.L.D., finds himself in need ofateam to pull the world back from the brink of disaster. Spanning the globe,adaring recruitment effort begins! 1080p BluRay 5.1 DTS Quality ျဖင့္ Marvel Cinematic Universe (MCU) Collection ကိုစုေပါင္းတင္ဆက္ပါသည္။MCU ဇာတ္ကားအားလံုးကို https://channelmyanmar.org/category/marvel-universe/ မွာ ...